Sukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Sukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi
Sukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi
Uva i-cliche rhoqo emva kwexesha: 'iifowuni ezingabizi ngoku zilungile, iifowuni ezilungileyo ngoku zitshiphu'. Umntu endisebenza naye uRado izama ukukuqinisekisa ukuba licebo elihle elo ukuthenga enye ngoku, kwaye uqhubeka nokuphikisa ukuba esona sizathu sokuba abantu bathenge iifowuni ezibizayo kwezi ntsuku ngamalungelo okuqhayisa.
Nangona ngokuqinisekileyo ininzi inyani kwingxoxo yokuba iifowuni ezingabizi ziba ngcono, oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uyithenge. Ewe, wena, umntu ofunda le migca, hayi umntu wentelekelelo emhlabeni. Ukuba uthatha ixesha lokufunda ngetekhnoloji kwaye uyayixabisa: ufanelwe yifowuni enkulu. Musa ukuhlala phantsi.
Intsomi # 1: Iifowuni ezingabizi zigcina imali
Ke mandiqale ngokudibanisa ezinye zeentsomi, kwaye eyokuqala kukuba ukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi kuyakongela imali. Into oza kuyenza uza kuhlawula kancinci xa uthengile, injalo loo nto. Kodwa uhlahlo-lwabiwo mali lwefowuni yakho ye-Android luya kufumana uhlaziyo lwesoftware olunye okanye ezimbini, kwaye amathuba okhuseleko lwayo aya kuba sengozini emva koko. Inkqubo yayo ecothayo iya kuqala ukubonisa ubudala bayo ngokukhawuleza. Ukugcinwa kwayo okuncinci kuya kugqitywa ngokukhawuleza. Ikhamera yayo iyakuphosa amaxesha abalulekileyo. Uya kufuna ukushenxisa kuyo ngokukhawuleza. Ayizukuhlala ixesha elide: ngokwasemzimbeni kunye nokusebenza-ngobulumko. Ewe ewe, uyakuhlawula ngokuthe ngqo kwifowuni yohlahlo-lwabiwo mali, kodwa amathuba okuba kuya kufuneka uyibuyisele kwakamsinya.
Intsomi # 2: Iikhamera zexabiso eliphantsi 'zilungile ngokwaneleyo'
Intsomi yesibini enkulu ejikeleze iifowuni zebhajethi kukuba iikhamera zazo ngoku 'zilungile ngokwaneleyo'. Kwaye ngokuqinisekileyo kukho ezinye iifowuni eziphakamise ibha malunga noku: i IPixel 3a series kunye Ifowuni ye-SE 2020 . Kodwa uninzi lweefowuni zohlahlo-lwabiwo mali alunayo: Galaxy A51 , umzekelo, inekhamera efanelekileyo, kodwa iya kwenza ngokufanelekileyo ukwenza iholide yakanye ebomini ukuba uye kwiDisneyland? Ngaba unokuhlala kwikhamera 'ehloniphekileyo' enokuthi okanye ingabanjwa ngorhatya olukhethekileyo kunye nomntu omthandayo okanye amanyathelo okuqala omncinci wakho? Ikhamera yefowuni yohlahlo-lwabiwo mali inokuba ingcono kodwa ayilingani neeflegi: zihlala zisebenza kancinci xa ngamanye amaxesha kufuneka uthathe loo mfanekiso kwangoko, azinakho ukurekhodwa kwevidiyo, ziphosa ukusondeza okubalulekileyo okanye ukubanzi ngokubanzi iikhamera, okanye xa zibandakanyiwe ezo khamera zisilela kumgangatho. Musa ukuhlala kwifowuni yohlahlo-lwabiwo mali ukuba ukhathalele iifoto.
Intsomi # 3: Ushicilelo oluncinci
Olunye uhlengahlengiso olukhulu lweefowuni zohlahlo-lwabiwo mali ongazukubona kwiphepha le-specs ngamava wokuzisebenzisa. Umzekelo, uninzi lweefowuni zohlahlo-lwabiwo mali zinengxelo ebuthathaka ye-haptic. Oko kunokubonakala ngathi ngumcimbi omncinci, kodwa kubomi bokwenyani, amathuba okuba uza kufumana uninzi lwezaziso kwaye ifowuni yakho iya kuhlala ibhabha ngalo lonke usuku. Ngaba ukulungele ukucatshukiswa yintshukumo yayo eyoyikekayo ngalo lonke ixesha?
Enye into edla ngokulibaleka kwifowuni yohlahlo-lwabiwo mali kukunqongophala kwebhayometriki ekhawulezileyo kunye yanamhlanje. Umzekelo, uhlahlo-lwabiwo mali lwe-iPhone SE lubonisa inzwa yeTouch ID yeminwe endaweni yenkqubo yokuqondwa kobuso ye-3D elula ngakumbi. Kwakhona, oku akuvakali ngathi yinto enkulu, kodwa ukuvula iifowuni amashumi okanye nangamakhulu amaxesha ngamaxesha ngalunye iminyaka… yinto enkulu leyo.
Intsomi # 4: Konke malunga nescreen
Okokugqibela kodwa ngokuqinisekileyo kungaphelelanga apho, ukufumana ifowuni enexabiso eliphantsi kuthetha ukufumana isikrini esingabonakali sihle. Isikrini yinto oyijongileyo kunxibelelwano ngalunye nefowuni yakho. Yinxalenye ye-quintessential yamava e-smartphone. Abantu abaninzi benza impazamo yokulinganisa isikrini kwisisombululo sayo okanye ubungakanani, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuvelisa umbala kwakhona, ukuqaqamba, ii-angles zokubukela kunye nezinye iimetrikhi ongazukuzibona kwiphepha le-specs. Ngaba ukulungele ukuzinza kwisiboniso esikhangeleka bland okanye ungaziphatha ngokwakho kumfanekiso omhle ngalo lonke ixesha ujonga ifowuni yakho. Ndiyazi ukuba andizukulalanisa kuloo nto.
Ke ewe, iifowuni zohlahlo-lwabiwo mali ziya ziba ngcono, kwaye ezo ziindaba ezimnandi. Kodwa ... ngoku, ukuthenga ngexabiso eliphantsi kuthetha ukuphoswa kwezona zinto zimnandi nezinomdla. Ingakulunga loo nto kumntu ongasebenzisi fowuni yakhe kwaye ukuba unguloo mntu, ungathandabuzi ukuyifumana Ifowuni yoMlilo G. okanye i-iPhone SE, okanye iPixel. Kodwa ukuba uluhlobo lomntu ofunda le migca, lowo uvuyiswa yitekhnoloji entsha, musa ukunciphisa inkanuko yakho! Sukwenza oko. Ziphathe ngokwakho kwinto eza kukuvuza ngamava amahle, into onokuyonwabela uyisebenzise.
irejista yangaphambi kwesango elimnyama
moto x inyulu vs iphone 6s
Uyitshintsha njani ngokukhawuleza i-smartphone yakho kwiPC yedesktop
Ukuvavanywa ngaphandle kwesibonelelo seQA
Uphononongo lukaGoogle Pixel 4 XL kwiinyanga ezi-4 kamva: kufanelekile ukuyifumana ngo-2020?
Eyona Pokémon ilungileyo yokulandela kunye neeapps ze-radar ze-Android
Ezona zixhobo zibalaseleyo zeLiDAR kwi-iPhone 12 Pro / Max yakho entsha
I-Epic kunye ne-Apple babuyela kwinkundla yase-US: Ngaba i-Fortnite ibuyela kwi-iOS
Ukutshintsha ukusuka kwi-Waterfall ukuya kuvavanyo lwe-Agile
Ungabhala njani kwaye ubethelele idatha kwiPython usebenzisa iThala leeNgcaciso
Uyifumana njani ifowuni yam
Inqaku leefowuni zasimahla ezivela kwiMetroPCS kunye neT-Mobile ixesha elincinci kuphela